सत्ताका लागि पैसा र पैसाका लागि सत्ता भन्ने गलत दृष्टिकोण हावी भयो : डा. लोहनी – Himalitimes
सत्ताका लागि पैसा र पैसाका लागि सत्ता भन्ने गलत दृष्टिकोण हावी भयो : डा. लोहनी
२०७७ फाल्गुन ७ १६:५० मा प्रकाशित
दाङ । राप्रपा अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको भनाइ र गराइबीच धेरै अन्तर रहेको बताएका छन् ।
प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राप्रपा दाङले घोराहीमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. लोहनीले अहिलेको नेतृत्वले जनताको हितको नारा दिने र काम उल्टो गर्ने बताए । नेपालमा सत्ताका लागि पैसा र पैसाका लागि सत्ता भन्ने गलत दृष्टिकोण विकसित हुँदै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सत्ताधारी पार्टीको भारदारी वर्गको भ्रष्ट स्वार्थमा राज्य केन्द्रित हुन थालेको विश्लेषण पनि उनले गरे । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका लोहनीले सरकार सञ्चालन र सुशासनबारे पनि असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् ।उनले भने- राजनीतिक समस्या समाधान भयो, अब समृद्धिको युगको सुरुवात हुनेछ भनी तीन वर्षअघि जनतालाई भनियो ।
तर अहिले परिस्थिति ठीक उल्टो भएको छ ।’ सरकारकै कारण मुलुक राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलमा रुमलिएको उनले बताए । उनले राष्ट्रपतिको भूमिका प्रति पनि प्रश्न उठाए । उनले भने- संविधानको संरक्षण भनिए गराइमा ऐन, कानुन र संविधान सत्ता स्वार्थको हतियार मात्र भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै हवाई भाडा बढ्यो
जम्मू–कास्मिरमा गोली चल्दा दुई जनाको मृत्यु